Barreeffama tokko, qubannoo qaree ammaa isa HTML tokko yk galmee barruu keessaatti, saaga.
Yoo galmeen kee barreeffama tokkoo ol qaba tahe, qaaqnii Barreeffama Gulaali, barreeffamaa gara barreeffamaatti utaaluuf, qabduu duraa fi qabduu ittaanaa of keessaa qabaata.
Geessituu tokko faayilii barreeffama tokkootti ida'a. Qabduu raadiyoo URL cuqaasitii, ittaansuudhaan geessituu isa sanduuqicha keessaa galchi. yookaan ammoo, qabduu sakattaa (...) cuqaasuudhaan booda qubannoo faayilicha agarsiifte, Saagi cuqaasuu nidandeessa. Faayiliin barreeffamaa inni walqabsiifame, madda lakkaddaa HTML keessatti, iyyaatoowwan ittaananiin eenyumeeffama:
/* barruu mara bakka kanatti tufadhu */
Faayila akka geessituutti saaguu barbaaddu sana agarssissuun booda Saagicuqaasi.
Lakkaddaa Barreeffamaa isa saaguudhaaf barbaaddu galchi.
Title is: Barruu Saagi